Ngo-Novemba u-2020-iNombolo ye-1 yeBhokisi yeBhola eYurophu
Archives Monthly: Novemba 2020
30 EyeNkanga 2020
Ngaba i-Evander Holyfield ilandelayo kaMike Tyson? (+ I-Tyson vs Holyfield 1 kunye neeVidiyo zokulwa ezi-2)
IBoxen247.com Akohlulwanga	U-Evander Holyfield, mike tyson, ITyson vs Holyfield 3	0
Ngaba i-Evander Holyfield ilandelayo kaMike Tyson?
I-Holyfield ibuza i-25 yezigidi zeedola ukuze uphumelele!
Ngempumelelo yehlabathi kwimpelaveki (ngokuchasene noRoy Jones Jr.) kunye nesihloko esishushu kakhulu ngalo mzuzu ngokubuya kukaTyson, umbuzo ngulo, ngaba nguEvander Holyfield Olandelayo kaMike Tyson?
UTyson ubuyile kwaye uza kuba okwethutyana. Abanye banokuncwina kwimbono ngelixa uninzi lusamkela ukubuya kwakhe, kodwa leyo yinto enye ehlala ilandela uTyson… .. iintloko.
Inye into eqinisekileyo, awungekhe ucinge ngoTyson kwaye ungalibali imilo emibini awayenayo noEvander Holyfield (ngo-1996 nango-1997). Okanye ndingathi ndiluma e-Holyfield. Ewe ufunda ngokuchanekileyo.
Ngaphandle kokuba ubufihle phantsi kwelitye kuyo yonke iminyaka yoo-11 (nditsho nentombi yam eneminyaka eli-1997 ubudala iyazi ngayo kwaye ibingaveli kum), kumdlalo ophindwayo kunye ne-Holyfield ngo-XNUMX, ngenxa yokudana (hayi ngendlala) uTyson uthathe isigqibo Indlebe ka-Holyfield, ekhafula inyama ekrwada eyayifakwe kwi-Holyfield kwinqanawa ababesilwa kuyo. Ewe, wayengafaneleki.
Ukuba ubufihle phantsi kwelitye, nazi iividiyo ezimbini zokulwa kunye ne-Holyfield kwiwebhusayithi yethu (Cofa nje isihloko ngasinye ukuze udlale):
UMike Tyson vs Evander Holyfield 1 (1996)
UMike Tyson vs Evander Holyfield 2 (1997)
Ngamafutshane, ngo-1996, i-Holyfield yacaphukisa amathuba okwehlisa u-Tyson owayeyintshatsheli enesisindo esinzima kwakhona, kuphela ngo-Tyson ukuba angafaneleki kumdlalo ophindaphindiweyo ngo-1997 wokutya indlebe yase-Holyfield.
Ukusukela ngoko, uninzi lwabalandeli belufuna umlo wesithathu, kodwa khange iphinde yenzeke xa uTyson ethatha umhlala-phantsi ngo-2005 nase-Holyfield ngo-2011. kumdlalo wamanqindi kufuneka kube, kulungile, uyoyikeka.
Ke xa kwabhengezwa ebutsheni balo nyaka ukuba uTyson uyabuya, iHallfield ngokwendalo waya ngqo kuqeqesho njengoko yena nabanye abaninzi babecinga ukuba uya kuba ngumchasi wendalo. UTyson ubonakala ngathi uxolile ngokuhamba kwexesha ngenxa yoko umngcipheko wokuqhawulwa komzimba wawubonakala uphantsi kwaye njengoko imali yakhe kule minyaka yayiye yehla (kwade kwavela indawo yoBhuti oMkhulu wase-UK), eli bekubonakala lelona xesha lilungileyo lokunyusa ingxowa mali yomhlalaphantsi. .
Kodwa hayi, bekungafuneki ukuba njengoko uTyson wakhetha ukuya kumchasi kuJones Jr. owayenodumo lokuba nomhlathi weglasi ngoku. Kunokubakho ukuthandabuza kwinxalenye kaTyson (uqikelelo nje) njengoko abantu abaninzi bekholelwa ukuba i-Holyfield inenombolo kaTyson nje ngomlo, nokuba ngoku uneminyaka eyi-58.
Nokuba ukweli nqanaba liphakathi eliphambili (okanye lingaphaya koko?), IHallfield ilunge njengefiddle kwaye kuye kwathiwa ayikaze iphume. Ukujonga okuhle yenye into kodwa ividiyo yesiqhelo yokwenza ujikelezo kwimidiya yoluntu ibonisa ukuba i-Holyfield ayilahlekanga ngendlela ejikeleze iringi, nokuba ihamba kancinci.
"Ngokuqinisekileyo yayingenguye," u-Holyfield uxelele i Ndiyimbaleki yembaleki. “Bendingayi kungena eringini ngemali engaphantsi kweedola ezingama-25.
“Ndimbethe kabini. Ndavakalelwa kukuba akulunganga ukuba ndimcele ukuba alwe nam. Andazi (ukuba uyoyika). Andinakuze ndibuze umntu ukuba.
"Ukuba bandibizile ukuba ndilwe kwiintsuku ezimbini, bendizokulwa ngeentsuku ezimbini."
UTyson uthe angathanda ukuthetha ne-Holyfield ngokobuqu njengaxa la maqela mabini ethetha, umbono ubonakala ngathi uphuma ngokukhawuleza ngefestile (mhlawumbi inkampu ye-Holyfield icela imali eyingozi kakhulu kwimeko apho uTyson ethanda iindlebe kwakhona).
"Mhlawumbi u-Evander kufuneka athethe nam kuba qho xa abo ndisebenza nabo bethetha nabantu abasebenza nabo, ayizukuhamba kakuhle," ucacisile uTyson.
“Andazi ke. Ukuba ungayibona into esiyenzileyo ngokuhlwanje, ukuba aba bantu bayikhathalele ngokwenene impilo-ntle ye-Evander ngebabenalo mlo no-Evander. Mhlawumbi siza kwenza enye kodwa nabani na onaye ophetheyo uyimpazamo ngokupheleleyo.
"Kulapho ndihlala khona," watsho uTyson. “Andizange nangelinye ilanga, kwanaxa usuku lwam lokuqala luphakathi kwaye ndophuka ubambo lwam kwaye umfana wayephula nje umhlathi wam, zange nangelinye ilanga ndathi 'yintoni le ndiyenzayo apha? Ndiyaphambana? ' Nditshilo nje ukuba ndikwindawo elungileyo. Ndathi ndikwindawo eyiyo.
“Ndonwabe kakhulu ndiyenzile le nto. Ndiza kuyenza kwakhona. Isibhakabhaka ngumda ngale ndawo. Sineentsomi ezininzi ezinomdla wokutsiba ebhodini kwaye sibandakanyeke kule nkqubo. ”
Ngeengxowa zemali ezichaziweyo ezichaphazelekayo (uTyson waxelwa ukuba uhlawulwe i-10 yezigidi zeedola kunye noJones Jr. $ 1 yezigidi- andiqinisekanga ncam ukuba olo hlulo lwasebenza njani), ndiya kuqiniseka ukuba baninzi abalwi abaphezulu abaye bachitha imali eninzi kwinkxaso yabantwana okanye bandwendwela zininzi kakhulu iiklabhu zemicu ezikhokelela kwiibhalansi zebhanki yabo hayi ngendlela ababeyiyo ngaphambili.
Kodwa, uEvander Holyfield? Ngempumelelo (ngaphandle komlo we-YouTuber) konke kuhambe kakuhle kakhulu. Ewe ndiyabona umlo wesithathu usenzeka e-Holyfield. Ndiyathemba ukuba uSnoop Dogg uzakwenza ingxelo.
Ukufumana iziphumo zamanqindi zamva nje kwaye ulwe neendaba, cofa nje > Iindaba zamanqindi
Zive ukhululekile ukucebisa ababhali (ababhali) nangaliphi na ixesha ukusinceda sikunike iziphumo ezingakumbi zomdlalo wamanqindi, iindaba zamanqindi kunye neevidiyo zomdlalo wamanqindi ongenazintengiso. Kuthatha nje ukucofa nje ezimbalwa, konke okufuneka ukwenze kukucofa ikhonkco le-PayPal, nokuba ku- $ 1 nje
Uhlaziyo luka-Alexander Povetkin lwe-COVID-19
IBoxen247.com Akohlulwanga	Alexander Povetkin, UDillian Whyte, Kutheni Forte vs Povetkin 2	0
Iingxelo ziyajikeleza ukuba u-Alexander Povetkin uchacha kakuhle ekhaya emva kwexesha elithile esibhedlele efumene i-COVID-19 ngaphambi komdlalo omiselweyo phakathi kukaPovetkin noDillian Whyte.
Sele eza kuqhubeka noqeqesho lomdlalo weWatchte onomhla wokuphinda ubhengezwe kungekudala. Ukuphela kukaJanuwari ngumhla oqikelelweyo kodwa kulindwe uviwo lomzimba ukuze kuqinisekiswe ngokupheleleyo.
Usompempe uLindsey Iphepha Jr. RIP
IBoxen247.com Akohlulwanga	ILindsey Ikhasi Jr	0
Ihlala ilusizi ukwazisa kodwa usompempe we-IBF uLindsey Page Jr. usweleke ngokudabukisayo nge-26/11/20. Wayengusompempe osebenzayo ukusukela ngo-1992 ukuya ku-2017.
Oku kulandelayo kuthathwe kwi IHolo yoDumo lomdlalo wamanqindi eNew Jersey:
“Umsebenzi wam wamanqindi ndiwuqale ndineminyaka elishumi elinesihlanu, ndiqeqeshelwa umthambo wamanqindi eTrenton P .AL. Kwakukho amajoni amaninzi endandibaqeqesha nawo kunye nabaqeqeshi abakhulu abafana noSammy Goss, uWally Livingston, uGeorge Johnson, uDavid Sanderson, uDuke Daniels, uPercy Richardson, uRobert Williams, uBucky Leggett noWayne Hedgepath.
“Umlo wam wokuqala ibikukulwa namashumi amabini anesithathu eminyaka ubudala uTommy Bender, endimoyisileyo ngomjikelo wesithathu we-TKO. Ndiqokelele irekhodi lama-96-18 kwabafundi. Ndikhuphisane kwitumente yaseGeorge Golden Gloves amatyeli asixhenxe, kodwa loo ntshatsheli yandisinda. Ndiqhubekile ndaphumelela itumente yeMercer County Boxing kwiiklasi ezintathu zobunzima obahlukeneyo, i-156 Novice, i-160 evulekileyo kunye ne-175 evulekileyo. Ndalwa kumlo weSizwe nowe-Olimpiki waseMpuma. Emva kokugqiba kwisikolo samabanga aphakamileyo, ndaya emkhosini. Ukubuya kwam eMkhosini, ndajika ndaba yingcali, ndisilwa nabo balwa noMitch “Igazi” Green, uChris McDonald, uJesse Burnett, uFrankie Crasson nabanye abaninzi. Kwakhona, ndaziqeqesha nabanye abagqwesileyo abanjengoLarry Holmes, uMichael Spinks, u-Eugene “uCyclone” Hart, noRandall “Tex” Cobb.
“Ukuthatha kwam umhlala-phantsi, ndaba yijaji nosompempe kwi-AAU Amateur Athletics Union apho ndaya khona kwimidlalo emininzi yamanqindi, iGolden Gloves Tournaments, iiLizwe kunye nee-Olimpiki zaseMpuma kwakunye neNkqubo yezeMidlalo yoLungiso yaseNew Jersey. Emva koko ndaye ndafundela isikhundla sokuba ngusompempe emva kokunikwa ithuba nguMkomishinala oHloniphekileyo uLarry Hazzard, uSr. nabanye. Ndikhe ndachaza ii-greats zamanqindi uDavid Tua, uChris Byrd, uDavid Reid, uGeorge Scott, uJuan Diaz, uElio Diaz, u-Imamu Mayfield nabanye abaninzi. Umsebenzi wam wamanqindi uya kuqhubeka ngokungenasiphelo logama nje uThixo endinika amandla okunyamezela. UPierre Benoist, omnye wootitshala bam bokuqala wayesoloko endixelela, "Ubukhulu bufunyenwe, awunikwa."
ILindsay Page ngusompempe owaziwayo wamanqindi eNew Jersey, ngakumbi kwi iphela eyenzekayo kwi yaku in KwiSixeko saseAtlantic.
ULindsey Page Jr. Ukulwa Okuphambili okuPhezulu
UBernard Hopkins vs. UJames Stokes
UDavid Tua no-Oleg Maskaev
UArturo Gatti vs. UTomas Damgaard
UMarco Huck vs. Frantisek Kasanic
UTomasz Adamek vs Michael Grant
UTomasz Adamek vs. UJason Estrada
U-Lucian Bute vs uFulgencio Zuniga
UKaizer Mabuza vs. UKendall Holt
Sicinga ngentsapho yakhe.
Iimpawu zikaTy Payne noMphathi kunye noMkhuthazi uTony Tolj
IBoxen247.com Akohlulwanga	UTony Tolj, UTy Payne	0
Ukulwa neKingscliff, eNew South Wales, uPayne wenza ubuchwephesha obunomtsalane kunyaka ophelileyo nge-knockout yesibini kumjikelo wakhe we-NSW. Kungekudala ukwenza ukuphuma kwakhe okwesibini eQueensland ngoDisemba 18, uPayne wakhetha ixesha lokuphucula igumbi lakhe elingasemva nendoda eqhubeka nokwakha iintshatsheli zehlabathi kuTony Tolj. Umgcini wamanqindi onamava wongeza uTy Payne kwisitali sakhe esinetalente nesikhulayo esiqhayisa ngokuthanda kuka-Andrew noJason Moloney asebenze nabantu abanjengoChris John ngaphambili.
U-Payne uphumelele impumelelo enkulu kumdlalo wokuzalwa wase-Australia; I-Australia National Championships 2015, iQueensland kunye neNew South Wales State titles kwi-2016, isihloko se-Interstate 2017 kunye nesihloko seClarence Valley kwi-2018 emenza abe lelona themba lishushu e-Australia.
Ukwenza iphulo kwi-Super Lightweight, uTy Payne unomdla omkhulu malunga nomsebenzi wakhe ngala magqabantshintshi alandelayo: "Ndibe nemilo engaphezulu kwe-100 njengesiqhulo kwaye bendihleli ndingumdlalo wamanqindi ukusukela ndandineminyaka eli-12 ubudala. Ukusukela ngoko, ibiliphupha lam ukuba yingcali kunye nokuphumelela isihloko sehlabathi. Indlela endisebenza ngayo ikwindawo yesibini kwaye ndinolawulo olululo nabantu abandingqongileyo, andithandabuzi ukuba ndingahamba yonke indlela. ”
UTony Tolj uphawule ngakumbi malunga nokufumana kwakhe okutsha "Ungumntwana olungileyo oneengxowa ezinokubakho kwaye ndiyakuvuyela ukwamkela kwiqela lethu. Singafezekisa konke akufunayo kwezemidlalo, unentliziyo entle kwaye ungumlinganiswa, kwaye nokuba ngumlobi onetalente. ”
Inkuthazo kaTy Payne iza ngohlobo lukaRoy Jones Jr, uCanelo Alvarez kunye nabafazi abatsha abazinzileyo u-Andrew noJason Moloney bejonge ukulingisa ezi ntshatsheli ukuba ziqhubeke zibange isilivere yakhe kwixa elizayo.
UDanny Garcia: "Ndikhulele nje kweso sikolo sidala ngengqondo"
IBoxen247.com Akohlulwanga	UDanny Garcia	0
UDanny Garcia Ethetha nomphathi we-PBC uRay Flores
"Ndithatha iqhayiya lePhiladelphia ngalo lonke ixesha ndingena eringini. Ngalo lonke ixesha ndinyathela iringi, ikratshi lasePhiladelphia likum. Ngokuqinisekileyo oku kuyimbambano.
“Ukuba andingowakwaPhilly, ngekungekho uDanny Garcia namhlanje.
“Ndikhule nje kuloo ngqondo yakudala yesikolo, ndafundiswa indlela yokulwa ngezandla zakho phezulu ndisengumntwana. Oko kuye kwandinceda kakuhle engqondweni nasemzimbeni ekukhuleni. Inyani yokuba ndinguPuerto Rican, ndinelo gazi kunye nelifa lemveli lasePuerto Rican. Ndivakalelwa kukuba ndinelona hlabathi libalaseleyo.
"Nge-5 kaDisemba, umboniso kaDanny Garcia uyeza eTexas, sana."
UJuan Pablo Romero woyisa uSergio Torres kunye neZinto zokuLwa kweKhadi ezivela eMexico
IBoxen247.com Akohlulwanga	Alejandro Gonzalez isibambi somfanekiso, UBryan Mercado, Eduardo Martinez, UJuan Pablo Romero, USergio Torres, UVictor hernandez	0
URomero woyisa iTorres kunye neziphumo ezivela eMexico 28/11/20
IStudios Televisa kwisiXeko saseMexico
URomero woyisa iTorres kunye neziphumo ezivela eMexico. Umnyhadala ukhuthazwe nguPromociones del Pueblo kwaye waboniswa ngumabonwakude yi-TUDN (Mexico kunye ne-US).
UJuan Pablo Romero (13-0, 9 KO) I-PTS 10 USergio Torres (27-9-1, 21 KO)
Amanqaku okulwa: URomero uphumelele ngesigqibo esifanayo ngamanqaku angama-100-90, 100-90, kunye no-99-91.
UBryan Mercado (18-1, 14 KO) I-PTS 8 Alejandro Gonzalez isibambi somfanekiso (7-2-2, 4 ze-KO's
Amanqaku okulwa: Amanqaku ayengama-77-76, 77-76, kunye nama-78-74 aphumelele amanqaku ngamxhelo eMercado)
Eduardo Martinez (6-0, 5 KO) U KO 5 UVictor hernandez (4-2, 2 KO)
Umabonwakude: TUDN (Mexico / US)
Unyuselo: Promociones del Pueblo.
nguKris Anthony (krisanthonyboxing@gmail.com)
29 EyeNkanga 2020
UMike Tyson kunye noRoy Jones Jr. Thumela ukuLwa iiNqaku eziMfutshane
IBoxen247.com Akohlulwanga	mike tyson, URoy Jones Jr., tyson vs uJones Jr.	0
UMike Tyson kunye noRoy Jones Jr. Thumela ukuLwa amaQaphu amafutshane 28/11/20
UMike Tyson kunye noRoy Jones Jr. balwa betsala umboniso ojikelezayo osibhozo nge-28/11/20. Emva koku, abo babini ngaphezulu kwama-50 babenale ilandelayo ukuba bathi:
“Andikuthandi ukuzoba. Ndinxiba iidrowa, andizobi, ”uJones (66-9, 47 KO's) uxelele uJim Grey ekupheleni kobusuku.
"Kufuneka siyenze kwakhona le nto," wanyanzelisa uTyson (50-6, 44 KO's).
"Ndiyasiqonda isizathu sokuba abantu bathi ukulwa noMike Tyson kuluhlu lwamabhakethi [into]," utshilo uJones. “Xa ekubetha, entloko, emzimbeni, kubuhlungu. Kum, bendicinga ukuba ndenze amanqindi ngokwaneleyo ukuwukhawulezisa.
“Kodwa, ndipholile ngokuzoba. UMike apha uzama ukuyenza kwakhona, kodwa… andazi. ”
"Uyithathile," waphendula watsho uTyson. “Uyithathile kwaye ubuyile njalo. Ndiyayihlonipha lonto. Ndiyayihlonipha lonto. Bendihlala ndiyenza oku imizuzu emithathu. Ngandlel 'ithile, loo mizuzu mibini ibingathi yimizuzu emithathu, ”wavuma uTyson. Ndonwabile ukuba ndiyifumene le nto phantsi kwebhanti kwaye ndiza kuqhubeka ukuya phambili. ”
“Wonke umntu uyamthanda uMike; Ndiyamthanda noMike, ”utshilo uJones. “Kodwa, yinto yokuthabatha amanqindi kuMike. Ndiza kuthetha nosapho lwam kwaye ndibone ukuba baziva njani ngayo. Ukuba babecinga ukuba bayakonwabela oko bakubonileyo kwaye bafuna ndibuye ndiphinde ndikwenze, siza kuphinda sikwenze kwakhona. ”
"Ngokuqinisekileyo," watsho uTyson kwimeko yokubuyela phantsi kweemeko ezifanayo. “Ndiyathemba (uJones) naye uzakubakhona ekhadini. Kufuneka siyenze kwakhona le nto. ”
UDana White uyasabela kuMike Tyson vs Roy Jones Jr.
IBoxen247.com Akohlulwanga	dana mhlophe, mike tyson, UMike Tyson vs Roy Roy Jr.	0
UMike Tyson vs Roy Roy Jr. 28/11/20
UDana White uphendula kuMike Tyson vs Roy Jones Jr. Zoba
Umshicileli wePost-Fight kwi-UFC kwi-ESPN 18
“Bendingafuni ukuthetha nantoni na embi kuba ndiyamthanda uTyson kwaye ungumhlobo wam olungileyo. Ndandisoyika. Uneminyaka engama-  ubudala. Ixesha aloyiswa. Ixesha lisithathela phantsi sonke enye yezinto ebendinexhala layo ngoMike yile yokuba unale aura ingakholelekiyo, kwaye  iminyaka ubudala - ukulwa ngumdlalo womfana. Yonke le nto ithethwayo, wajonga inkosi-eyoyikekayo ngobu busuku.
“Ndichukunyiswe yindlela ebemhle ngayo. Enye yezinto ebendinexhala ngayo noRoy-Roy oneminyaka engama-51 ubudala, kodwa uRoy ebesebenza kakhulu kunoTyson. Kodwa uRoy udinwe kakhulu ngokuhlwanje kunoMike, eyayothusa. Ndonwabile ngaye. Ndiyathemba ukuba bobabini benze i-f- king i-zillion zeedola, kwaye igqithile kulindelo lwam.
“UTyson uphumelele umlo. Wayebonakala emhle. Yindoda esele ikhulile kwaye izakwenza le nto ifuna yona, kodwa ilungile kuye. Ngokwenene kwakungumlo olungileyo. Kwakungumlo owonwabisayo ukubukela kwaye ndacinga ukuba ubukeka emhle ngokwenene. Ndonwabile ngaye. ”
UDaniel Dubois Wathinteka ithambo le-Orbital eliQhekekileyo kwiJoyce yesihloko sokulwa
IBoxen247.com Akohlulwanga	UDaniel Dubois, UDubois vs Joyce, UJoe Joyce	0
UDaniel Dubois vs Joe Joyce 29/11/20
UDaniel Dubois waBandezeleka ngethambo le-Orbital Orbital
Ukuphulukana nomlo wakhe obizwa ngokuba nguJoe Joyce, uDaniel Dubois ukusukela oko wajongana nokugxekwa ngokuqatha ziingcali ezininzi, iindawo zeendaba kwaye ngakumbi kwimidiya yoluntu (kutheni ndingothusi).
Emva kokuthatha idolo ngoncedo oluvela kwi-jab eqinile evela kuJoyce, uDubois emva koko wazivumela ukuba abalelwe ngaphandle nto leyo eyakhokelela ekubeni ngoku abhalwe ukuyeka.
Emva kokuchitha ubusuku esibhedlele, kuxelwe ukuba uDubois ngenene wafumana ithambo lomzimba eliqhekekileyo elidityaniswe nomonakalo wemithambo-luvo ejikeleze iliso lasekhohlo. Uya kuba nengcali ngoMvulo ukuze abone ukuba kufuneka utyando na.
Kude kube nawuphi na umntu othe wabuya sele ekule meko yomonakalo, nakuphi na ukugxekwa okungafanelekanga kufanele kuthintelwe. Omabini la majoni abeka umboniso olungileyo wezihloko ezininzi ezisindayo ezisemngciphekweni kwaye nge-23, uya kubuya kwakhona, mhlawumbi angcono kunangaphambili.
KuJoe Joyce, waphakama waya kwinto ebonisa ukuba abantu abaninzi abathandabuzekiyo baphosakele kwaye kufanelekile, ngoku uya kudlulela kumawonga aphezulu kwaye kufanelekile. Uye weza esemgangathweni kunangaphambili kwaye akayekanga ukwenza eyona nto ayenzayo.
Umlo kulindeleke ukuba ubeyimfazwe kwinqanaba elithile, kwaye khange badanise.
Enkosi uDaniel noJoe ngomlo omkhulu.
UMike Tyson vs Roy Jones Jr. Idabi lokuDweba kunye nokuLwa kweKhadi Iziphumo ezivela eLos Angeles
IBoxen247.com Akohlulwanga	UBadou Jack, UBlake McKernan, U-Edward Vazquez, UGregory Corbin, Irvin Gonzalez, Jake Paul, UJamaine Ortiz, UJoe Cusumano, mike tyson, UNate Robinson, URoy Jones, USulaiman Segawa, tyson vs uJones Jr.	0
UTyson vs Jones Jr. Idabi lokuDweba
IZiko eliQhelekileyo, eLos Angeles
Mike Tyson D 8 URoy Jones Jr.
(I-WBC yeWightweight Frontline Isihloko)
Ukubuyisa iinkumbulo zokuba uTyson walwa nini noJames “Bonecrusher” Smith, loo nto yayinomdla nangona yonakaliswe kukubanjwa okuqhubekayo nguJones Jr. Kwabonisa isithembiso ngento emangazayo yokuba ngumlo olungileyo.
Umzobo wanikwa ukuba ungavumeli umntu ophulukeneyo, acinge ukuba ngumlo osondeleyo. UJones Jr. uzame "ukukhanyisa izihlangu" uyakunyanga kunye noTyson ehlala esongela ngalo lonke ixesha. Lindela ukubona okungakumbi kubo bobabini abo balwayo.
Amanqaku asemthethweni ayengama-76-76 (kwijaji uChad Dawson), i-79-73 yeTyson (evela kuChristy Martin) kunye no-80-77 kaJones Jr (waseVinny Pazienza).
Into ephambili kukuba ukuhamba kuhambe kakuhle, akukho mpikiswano kwaye yayinokhuphiswano (ngaphandle kokubamba ngokugqithileyo). Bonke bagoduke bonwabile kungekho monakalo wenziweyo. Ihlazo elifanayo alinakuthethwa ngoJake Paul vs Nate Robinson!
Jake Paul (2-0, 2 KO) U KO 2 UNate Robinson (0-1)
Amanqaku okulwa: Ixesha lokumiswa yayingu-1: 35 kumjikelo wesibini ukuphumelela kukaPaul KO. URobinson akufuneki abekho kwindandatho njengoko ibiphantsi kathathu kwaye aphume ukubala okwethutyana ngokudlula kokugqibela. Wayefuna unyango.
UBadou Jack (23-3-3, 13 KO) I-PTS 8 UBlake McKernan (13-1, 6 KO)
Iindaba zokulwa: Amanqaku angama-80-72, 80-72, 80-72, onke aphumelele amanqaku angafaniyo kaJack.
UJamaine Ortiz (14-0, 8 KO) W TKO 7 USulaiman Segawa (13-3-1, 4 KO)
Amanqaku okulwa: Ixesha lokumiswa yayingu-2: 50 kumjikelo we-7 wokuphumelela kwe-Ortiz yokumisa.
U-Edward Vazquez (I-9-0, 1 KO) I-PTS 8 Irvin Gonzalez (14-3, 11 KO)
Amanqaku okulwa: Amanqaku ayenjalo 77-75 Vazquez, 77-75 Gonzalez, 75-77 Vazquez yesigqibo sokuhlulahlula uVazquez.
Umdlalo weRashad Coulter vs Hasim Rahman Jr. urhoxisiwe emva kokuvavanywa kukaRahman Jr. emva kwexesha kuvavanyo lwe-COVID-19. I-Coulter engaphumelelwanga yayisindwa ukuze ihlawulwe ngokwesivumelwano sayo sokulwa.
28 EyeNkanga 2020
UJoe Joyce woyisa uDaniel Dubois kunye neZiphumo eziGcweleyo zeKhadi lokuLwa e-UK
IBoxen247.com Akohlulwanga	Abder, UDaniel Dubois, UDanny Whitaker, UDavid Adeleye, UDubois vs Joyce, UHamza Sheeraz, UJack Catterall, UJack Massey, UJoe Joyce, U-Mohammed Ali Bayat Farid, UNicolas Pitto	0
UDaniel Dubois vs Joe Joyce Iziphumo eziBukhoma
Indlu yeCawa, eWestminster, eNgilani.
I-ESPN + i-US / iBT yezemidlalo yase-UK
UJoe Joyce (12-0, 11 KO) I-KO 10 UDaniel Dubois (15-1, 14 KO)
Amanqaku okulwa: UJoyce ujikeleza 1. UDubois ujikeleza 2. Nokuba umjikelo wesithathu. Joyce 3 umjikelo. Dubois umjikelo wesihlanu. I-Dubois ithatha umjikelo wesi-4 kodwa ukuvalwa kwamehlo kwe-Dubois. Kwakhona, iDubois ithatha nje umjikelo 5. Nokuba yeyesi-6. Joyce 7th. Ngomhla we-8, uJoyce wehla i-jab enzima kwiliso elonakeleyo. UDubois uthathe idolo emva koko wabalwa ngaphandle. Ixesha lokumiswa yayingu-9: 10 kumjikelo we-0.
UHamza Sheeraz (12-0, 8 KO) W RSF 9 UNicolas Pitto (26-8-2, 8 KO)
Amanqaku okulwa: Ixesha lokumiswa yayingu-1:11 kumjikelo we-9.
UJack Catterall (26-0, 13 KO) I-PTS 10 Abderrazak Houya (14-3, 2 KO)
Amanqaku okulwa: I-Houya phantsi kumjikelo we-6 kunye no-9. Amanqaku ayengama-99-90 okuphumelela kweCatalall.
UDavid Adeleye (4-0, 4 KO) W TKO 2 UDanny Whitaker (4-2, 0 KO)
Amanqaku okulwa: UWhitaker ubuye phantsi kabini kumjikelo wesi-2. Ixesha lokumiswa ibingu-2: 09 kumjikelo we-2 wokuphumelela u-Adeleye.
UJack Massey (17-1, 8 KO) I-PTS 8 U-Mohammed Ali Bayat Farid (16-2-1, 16 KO)
Amanqaku okulwa: amanqaku angama-79-74 okuphumelela kweMassey.
UMike Tyson vs Roy Jones Jr. Umboniso weVidiyo
IBoxen247.com Akohlulwanga	Intsimbi uMike, I-iron mike tyson, mike tyson, URoy Jones, URoy Jones Jr., umbulelo, Ividiyo yombulelo, tyson vs uJones Jr.	0
Phambi komboniso wabo osibhozo ojikelezayo ngomhla we-28/11/20, le yividiyo elula kwaye ehlekisayo evela kwindlu yaseTyson.
UJulio Cesar Chavez Jr. Woyisa iJeyson Minda kunye neZiphumo zeKhadi lokuLwa laseMexico
IBoxen247.com Akohlulwanga	Arce vs UCarlon, Chavez jr vs Minda, NguYesu Carlon, UJeyson Minda, UJulio Cesar Chavez Jr., UKarim Arce	0
UChavez Jr. woyisa uMinda
Uhlaziyo lweParque, iCuliacan, iSinaloa, Mexico
UChavez Jr. woyisa uMinda kwiParque Revolution, eCuliacan, eSinaloa, eMexico. UJeyson Minda ubambele uNicolas Masseroni emva kwexesha ekunokuthiwa akanakwenza ubunzima kodwa uMasseroni walikhaba eli bango kwiqela laseChavez Jr.
Kucingelwa ukuba ebesemngciphekweni kakhulu ngayo yonke impumelelo yakhe eza ngokunkqonkqoza nelahleko enye kuphela kwirekhodi yakhe. Ngale nto engqondweni, abanye bathi Chavez jr. Ubambelela kwinto enokuthi ithathwa 'njengemlo olula' kwimali ezinkozo ekupheleni kobomi bakhe. Ukulunga, oku akukutsha.
Into eqinisekileyo yeyokuba umlo kaNicolas Masseroni ephepheni ubungumlo olunge kakhulu kodwa oyingozi.
UJulio Cesar Chavez Jr. (56-5-1, 34 KO) W TKO 4 UJeyson Minda (14-3-1, 8 KO)
Amanqaku okulwa: Owayesakuba yintshatsheli ye-WBC middleweight intshatsheli uChavez Jr. woyisa uMinda, ehlasela umzimba kaMinda ngokuqatha kulo lonke ixesha lokugqibela, emlahla ngokujikeleza amabini, amathathu, kunye nesine. Ikona kaMinda ekugqibeleni yawangawangisa itawuli. Umlo wenzelwa ubunzima obunzima. UMinda wabambela kade.
UKarim Arce (18-0-2, 8 KO) I-PTS 10 NguYesu Carlon (9-8-2, 3 KO)
Amanqaku okulwa: Kwimeko apho kungekho manqaku abhengeziweyo, yayingumlo owonwabisayo ukusuka ekuqaleni ukuya ekugqibeleni. UArce, umtshana webali lomsesane waseMexico uJorge Arce, waphakamisa ingalo yakhe ekupheleni komlo. Kwi-bout eyenziwe kwi-bantamweight, u-Arce wagcina irekhodi lakhe elingenakubethwa.
UDaniel Jacobs woyisa uGabe Rosado kunye neZiphumo eziGcweleyo zeKhadi lokuLwa eFlorida
IBoxen247.com Akohlulwanga	UBrandon Maddox, UDaniel Jacobs, UDaniel Yeleussinov, UEmmanuel Tagoe, UGabe Rosado, UJulius Indongo, Mahammadrasul Majidov, UMason Menard, UNikita Ababiy, USahret Delgado	0
UJacobs woyisa iRosado ngesigqibo sokwahlulahlula
I-Hard Rock Live kwi-Seminole Hard Rock Hotel kunye neCasino Hollywood, eFlorida.
UJacobs woyisa iRosado eFlorida ngomdlalo wechess ongakhange ukhuphe kuyo yonke imijikelo eli-12.
UDaniel Jacobs (37-3, 30 KO) I-PTS 12 (SD) UGabe Rosado (25-13-1 14 KO's)
Amanqaku okulwa: Amanqaku ayi-115-113 eRosado, 115-113, 115-113 Jacobs. Ophumeleleyo ke ngoko wayeyintshatsheli ye-2x yobunzima obuphakathi UDaniel Jacobs ngesigqibo sokwahlulahlula. I-Bout yenziwe nge-superweightweight.
UDaniel Yeleussinov (10-0, 6 KO) U KO 2 UJulius Indongo (23-3, 12 KO)
(Isihloko se-IBF Intercontinental welterweight)
Amanqaku okulwa: I-Indongo yangaphambilini emanyeneyo ye-140lb yehlile kumjikelo wokuqala kwaye kwakhona kumjikelo wesibini. U-Indongo khange anqwenele ukuqhubeka emva kwankqonkqozo yesibini. Ixesha lokumiswa yayiyi-1: 24 yokuphumelela kwe-Yeleussinov KO kumjikelo we-2. U-Yeleussinov wayeyimbasa yegolide ye-Olimpiki yase-Rio ngo-2016.
UNikita Ababiy (10-0, 6 KO) I-PTS 6 UBrandon Maddox (7-4-1, 5 KO)
Amanqaku okulwa: Amanqaku angama-59-55, 59-55, 59-55 amanqaku e-Ababiy aphumelele nge-bout eyenziwe kwi-middleweight.
UEmmanuel Tagoe (32-1, 15 KO) I-PTS 10 UMason Menard (36-5, 25 KO)
Amanqaku okulwa: Amanqaku angama-95-95, 96-94 kunye no-98-92 ngamanqaku aphumeleleyo kwi-WBO # 5, IBF # 7, WBC # 8 engasindi Tagoe.
Mahammadrasul Majidov (3-0, 3 KO) W TKO 3 USahret Delgado (8-0, 7 KO)
Amanqaku okulwa: Isandla esikhulu sasekunene sashiya i-heavyweight ye-Delgado enzima engakwazi ukuqhubeka.
Shot of the Day: UMike Tyson kunye noRoy Jones Jr.
IBoxen247.com Akohlulwanga	Intsimbi uMike, I-iron mike tyson, mike tyson, URoy Jones, URoy Jones Jr., tyson vs uJones Jr.	0
UMike Tyson kunye noRoy Jones Jr. Ukujongana ubuso ngobuso
UMike Tyson kunye noRoy Jones Jr. bajongane phambi komdlalo wabo wesibhozo wokujikeleza ngoMgqibelo 28/11/20. Umzuzwana ozolileyo, ukuzola phambi komoya. Umlo ofanele ukwenzeka ngo-2003, awuzange uphuke kakhulu.
27 EyeNkanga 2020
UTony Yoka woyisa ihammer yamaKrestu kunye neZiphumo eziGcweleyo zeKhadi lokuLwa eFrance
IBoxen247.com Akohlulwanga	Aboubeker Bechelaghem, Isando samakristu, U-Emma Gongora, UEstelle Yoka-Mosely, UKamil Sokolowski, Tony Yoka, UVictor Faust, IVolkan Gökcek, Yoka vs uHammer	0
H Arena eNantes, eFrance
Tony Yoka vs Christian Hammer 27/11/20 Iziphumo zomdlalo wamanqindi
I-Yoka yoyisa iHammer kunye neziphumo ezipheleleyo ezivela kwikhadi elipheleleyo lokulwa elivela kwiH Arena eNantes, eFrance. I-headliner yayiyi-2016 ye-Olimpiki yegolide ye-Olimpiki u-Tony Yoka kunye nenkosikazi yakhe, u-Estelle Yoka-Mosely.
Tony Yoka (9-0, 7 KO) I-PTS 10 Isando sobuKrestu (25-7, 15 KO)
Iindaba zokulwa: Amanqaku ayengu-100-89, 100-89, 100-89 kwi-a UYoka walatha uloyiso. I-Hammer yancitshiswa inqaku kumjikelo wesithandathu ukubetha kwikhefu. Imbasa yegolide yeOlimpiki ka-2016 ihlala ingabethwa.
UVictor Faust (5-0, 4 KO) I-PTS 6 UKamil Sokolowski (10-20-2, 4 KO)
Amanqaku okulwa: USokolowski wayephantsi kumjikelo wesithathu ngamanqaku angama-60-53, 60-53, 60-53 UFaust uphawula uloyiso. I-Faust engaphumelelanga enzima kuye kwafuneka ihambe umgama okokuqala.
IVolkan Gokcek (5-0, 2 KO) I-PTS 6 (SD) Aboubeker Bechelaghem (I-12-11-2, 1 KO)
Amanqaku okulwa: U-Bechelaghem wabhengezwa njengophumeleleyo kodwa xa kwaqala impikiswano kunye noqhanqalazo kwiqela lase Gokcek, isigqibo salungiswa I-Gokcek yahlula izigqibo ngokuphumelela. Amanqaku ayengu-59-55 ka-Bechelaghem, 58-56 kunye no-58-56 eGokcek. UJunior welterweight Gokcek ususile nje ukugqitha lo mdlalo owenziwe kwijunior welterweight.
Imbasa yegolide yeOlimpiki ka-2016 UEstelle Yoka-Mosely (I-8-0, 1 KO) I-PTS 8 U-Emma Gongora (0-2)
Amanqaku okulwa: Umlo omncinci obhinqileyo. Amanqaku angama-80-72, 80-72, 80-72 okuphumelela amanqaku eYoka-Mosely. UGongora ubambele kade. U-Yoka-Mosely ngumfazi wesisindo esinzima u-Tony Yoka owayesilwa kumnyhadala ophambili.
UMike Tyson vs Roy Jones Jr. kunye neKhadi elipheleleyo leMfazwe yokuLwa okuvela eLos Angeles
IBoxen247.com Akohlulwanga	UBadou Jack, UBlake McKernan, U-Edward Vazquez, UGregory Corbin, Irvin Gonzalez, Jake Paul, UJamaine Ortiz, UJoe Cusumano, mike tyson, UNate Robinson, URoy Jones Jr., USulaiman Segawa, tyson vs uJones Jr.	0
I-Tyson vs Jones Jr. 28/11/20
Kwinto eyayithotyelwe ubunzima, la mabali mabini manqindi ekugqibeleni ahlangana kumlo owawumele ukwenzeka kwiminyaka elishumi elinesixhenxe eyadlulayo.
UMike Tyson 220.4 ngokuchasene noRoy Jones Jr. 210
Jake Paul Ngo-189 xa kuthelekiswa UNate Robinson 181
UBadou Jack Ngo-188.9 xa kuthelekiswa UBlake McKernan 186.8
UJamaine Ortiz Ngo-133.5 xa kuthelekiswa USulaiman Segawa 131.8
Irvin Gonzalez Ngo-124.4 xa kuthelekiswa U-Edward Vazquez 125.4
UJoe Cusumano Ngo-224.5 xa kuthelekiswa UGregory Corbin 291.8
UFloyd Mayweather 50-0 Rekhoda ekhuselekileyo njenge-54-1 yeHlabathi yeHlabathi yeHlabathi yokuTyhwatyhwa kukothuka
IBoxen247.com Akohlulwanga	Chayaphon inyanga, UFLOYD MAYWEATHER, UPanya Pradabsri, Wanheng Menayothin	0
Umhlaba weHolo yeSixeko eNakhon Sawan Thailand
UFloyd Mayweather 50-0 irekhodi ekhuselekileyo
UFloyd Mayweather 50-0 irekhodi ekhuselekileyo okwangoku njenge-underdog Panya Pradabsri isusa izicwangciso zokubuya kuka-Wanheng Menayothin njengoko ephumelela isigqibo esisondeleyo.
UPanya Pradabsri (35-1, 24 KO) I-PTS 12 Wanheng Menayothin (54-1, 18 KO)
Amanqaku okulwa: Amanqaku okulwa ayengu-115-113, 115-113, 115-113 bonke bexhasa i-600 underdog.
U-Wanheng oneminyaka engama-35 ubudala wayesenza isihlandlo sakhe se-13 sokukhusela isihloko se-105 lb. Irekhodi likaFloyd Mayweather le-50-0 ligqithiswe yirekhodi likaMayayothin lika-54-0 emva kokuba ethathe umhlala-phantsi kodwa wabuya emva kokuthatha umhlala-phantsi ngokufutshane ukuze aphulukane nePradabsri.
UFloyd ubuyisa ukwamkelwa kweyona rekhodi ilungileyo kwikhondo elingabethwanga.
Ukufumana iziphumo zamanqindi zamva nje kwaye ulwe neendaba, cofa nje > Iziphumo zamanqindi
UFlorian Marku utyikitya kunye nomdlalo wamanqindi kaEddie Hearn
IBoxen247.com Akohlulwanga	UEddie Hearn, UFlorian Marku, umdlalo wamanqindi	0
UFlorian Marku Utyikitya noEddie Hearn 27/11/20
U-Florian Marku waseLondon waseAlbania weWelweightweight utyikitye isivumelwano sokukhuthaza ukulwa kunye no-Eddie Hearn we-Matchroom Boxing.
Owayesakuba ngumlobi we-MMA wajika ngobungcali ngoDisemba 2018 kwaye uphumelele lonke ukhuphiswano lwakhe olwesixhenxe ngendlela enomdla, kunye nezohlanu zoloyiso ziza ngaphakathi emgama. Uqeqeshwe nguDon Charles kwaye ulawulwa yi-S-JAM Boxing, uMarku akakhange abe nazintloni ekubizeni iiWelterweights eziphezulu e-UK, noConor Benn noChris Kongo behleli phezulu kuluhlu lwababethiweyo.
Ukuqhayisa ngokulandela okulandelayo, i-Southpaw eneminyaka engama-28 ithengise indawo yaseLondon ye-1200-seater York Hall inikezelwe kwi-UK yakhe yokuqala ngo-Matshi 2019 ngaphambi kokuloba ngaphezulu kwama-800 abalandeli kwi-O2 kumjikelo wesine we-KO weTommy Broadbent ngoJulayi, kwaye um-5 '8 "oyingozi unethemba lokwamkela umkhosi wakhe okhulayo wabalandeli ubuyela kumabala emidlalo ase-UK ngo-2021.
'Inkosi yaseAlbania' yagqibela ukubonwa yenza umsebenzi omfutshane kaMuma Mweemba kwinyanga ephelileyo, ibeka umlo-moya osekwe eSheffield amatyeli amabini ngaphambi kokuphela kwenkqubo kumjikelo wokuvula ngentambo yasekhohlo ethumele umchasi wakhe ukuba abetheke ngeentambo. Ukufumana amandla e-KO abulalayo ezandleni zozibini, uMarku uzimisele ukushukumisa isahlulo se-147lbs zasekhaya ngaphambi kokujolisa kwiimbeko zeHlabathi.
“Ndonwabe kakhulu kukujoyina u-Eddie Hearn kunye ne-Matchroom Boxing,” utshilo uMarku. “Kulapho kudlala khona amakhwenkwe amakhulu, kwaye ndizakubonisa ukuba yeyona Welterweight inobungozi elizweni. Ukumkani waseAlbania uyeza. ”
“Ndiyavuya ukwamkela uFlorian kwiqela,” utshilo uMlawuli oPhethe iMidlalo eMatchroom uEddie Hearn. “Unabalandeli abothusayo nabanyanisekileyo nabangabona bantu banenzondelelo yempambano endiyibonileyo kumdlalo wamanqindi kunye nesimbo sabalandeli esinobuhlobo esizakukhanyisa amabala emidlalo namagumbi angaphambili kwilizwe lonke. Ndijonge phambili kulonwabo oluninzi kunye noFlorian kunye ne-S-JAM, hlala ubukele izaziso ezinomdla. ”
USam Jones weS-JAM Boxing uthe: “Mna no-Adam Morallee sonwabile ukuphinda sidibane neMatchroom Boxing. Siyakholelwa ukuba uFlorian unokuba yiChampion yeHlabathi kwaye siyazi ukuba uEddie kunye neMatchroom ngabo bamseleyo. Sijonge phambili kubusuku obukhulu obuzayo. ”
UDaniel Dubois vs Joe Joyce oMlo oPheleleyo weKhadi yokuThoba evela e-England
IBoxen247.com Akohlulwanga	Abderrazak Houya, UDaniel Dubois, UDanny Whitaker, UDavid Adeleye, UDubois vs Joyce, UHamza Sheeraz, UJack Catterall, UJack Massey, UJoe Joyce, U-Mohammed Ali Bayat Farid, UNicolas Pitto	0
UDaniel Dubois vs Joe Joyce 28/11/20
UDaniel Dubois (15-0, 14 KO) 244.4 lbs
UJoe Joyce (11-0, 10 KO) 258.9 lbs
UJack Catterall (25-0, 13 KO) 143.2 lbs
Abderrazak Houya (14-2, 2 KO) 143.2 lbs
UHamza Sheeraz (11-0, 7 KO) 153.6 lbs
UNicolas Pitto (26-7-2, 8 KO) Iilitha ezingama-152.6
UDavid Adeleye (3-0, 3 KO) 219 iilitha
UDanny Whitaker (4-1, 0 KO) 260 lbs
UJack Massey (16-1, 8 KO) 201.4 lbs
U-Mohammed Ali Bayat Farid (16-1-1, 16 KO) 200.4 lbs
26 EyeNkanga 2020
Uvavanyo lukaJoe Joyce loMqeqeshi luLungele i-COVID-19
IBoxen247.com Akohlulwanga	UAdam Moralee, UIsmael Salas, UJoe Joyce	0
UJoe Joyce vs UDaniel Dubois 28/11/20
U-Ismael Salas uthunyelwe ekhaya emva kovavanyo oluqinisekileyo lwe-COVID-19
"UJoe bekufanele ukuba uqeqeshwe eVegas kunye nomqeqeshi wakhe kodwa i-coronavirus iqhekeze yonke into kuye wonke umntu," utshilo u-Adam Moralee, igqwetha likaJoyce.
“USalas ngumqeqeshi ophambili onamajoni amaninzi kwaye wazama ukubeka phambili uJoe Joyce, wafika ngaphaya, kodwa kwafuneka abuyele eVegas kuba ungumntu othembekileyo.
“Sasifuna uSalas nathi ngalo lonke ixesha kodwa kwafuneka asebenze namanye amajoni akhe, ngenxa yoko akazange akwazi. Besibazi ubungozi.
“Besixhalabile ngokuba uSalas abuyele eVasgas, sele emkile nge-31 ka-Okthobha. Ukuba kwindawo yokuzivocavoca ejikeleze amanye amajoni besinexhala lokuba angayifumana i-coronavirus, ibiyingozi leyo.
“Siyakholelwa ukuba uSteve Broughton ngumqeqeshi okumgangatho wehlabathi kwaye sinamava kaJimmy Tibbs, obesekoneni kuwo wonke umlo kaJoe Joyce UK.
"UJoe uphile qete, uSteve ebengumqeqeshi wakhe omkhulu ukusukela ngoMeyi, kubandakanya nomlo waseWallisch."
"Sibeke amanyathelo ukuqinisekisa ukuba xa ebuyela elizweni, wayehlukanisiwe naye wonke umntu," utshilo uMoralee.
“Ebekhe wangahambi wonke umntu, ngakumbi uJoe, ebekwihotele eyahlukileyo, wafumana iteksi eyahlukileyo apha, kuvavanywe yedwa kwaye waya egumbini lakhe.
Emva koko kuvavanyo lwakhe kubuye kwathiwa unayo kwaye kuye kwafuneka agoduke. ”
UDaniel Dubois vs UJoe Joyce wokugqibela kwiNkomfa yeendaba
IBoxen247.com Akohlulwanga	UDaniel Dubois, UDubois vs Joyce, ngokungafihlisi warren, UJoe Joyce	0
UDaniel Dubois: Ndiza kumqhekeza uJoe, ndimnqumle ndithumele umyalezo kwihlabathi
UJoe Joyce: Ndiza kumbetha ngenqindi uDubois ade awe phantsi
Ifoto: Ngokunyanisekileyo kwe-Queensberry Promotions
Yiminyaka engama-40 yokundinyusela nge-1 kaDisemba kwaye lo ngowona mlilo wokunkcenkceshela umlomo, kwiintsuku ezintathu ngaphambi kweso sikhumbuzo. Yintoni eyenza ikhetheke? Banobunzima obunzima kakhulu abenze yonke into ebuzwayo ukuza kuthi ga ngoku. Ayifane yenzeke into yokuba bayalwa kweli nqanaba lamakhondo omsebenzi, kodwa xa umlo wawukhutshiwe bobabini babefuna kwaye khange bathathe manyathelo abuyela umva. Oko kukuxelela inkolelo yabo. Bakholelwa ukuba babethana. Akukho kunikwa kuyo nayiphi na kuzo. UJoe unamava amateur amangalisayo, waphangwa imbasa yeGolide kwiOlimpiki. Uzisa loo nto etafileni. UDaniel unikele ngobomi bakhe kumdlalo wamanqindi kwaye ujonge kwinto ayenzileyo emva nje kokuba ebesilwele isixhenxe esiphezulu. Ngomhla onamava onke kunye nokuxhonywa kwamandla kaJoe kwaye sinengonyama encinci elambileyo efuna ukuphuma ibonise into anayo. UDaniel ngumphangi omkhulu kwaye ubamba iingcinga zomntu wonke. Inezithako zomlo omangalisayo, omangalisayo. Nokuba kwenzeka ntoni ophumeleleyo uya kuba sisinyanzelo esitsha kwi-WBO okanye alwe ne-Usyk kwisihloko esingenamntu ukuba u-Anthony Joshua ulwa noTyson Fury. Abantu bathetha ngoDaniel ngokungathi uyiponi enye kwaye une-punch enkulu, kodwa une-jab enkulu. Kuyinto entle kakhulu. Wonke umlo uzisa enye into. UJoe uya kuzisa okona kulungileyo kuye. Kungenxa yoko le nto kungumlo omangalisayo. Ndibona njani? Nabani na olawula lo mlo ukusukela ekuqaleni uya kuba ophumeleleyo. Yiyo le - umzuzu omkhulu ngexesha labo bobabini. Ophumeleleyo ngexesha elikhulu. Ukuba uza kubukela nawuphi na umlo kulo nyaka okanye kwiinyanga ezili-12 ezizayo yile.
Ndiziva ndizithembile kwaye ndishiye ilitye ndingaguqukanga kuqeqesho. Andoyikiswa ngamava akhe. Akazange angene nomlo onjengam ngaphambili kwaye ndikulungele ukuhamba. Ndiyifezekisile into endiyifunayo kwaye ikamva lam. Ungaphikisana nabanye abafana awababethayo bedlulileyo. Ndimncinci kwaye ndilambile. Ndikulungele ukuya kumjikelo we-12 akukho ngxaki ukuba kufuneka. Ndikulungele umlo omde, onzima kodwa okhawulezayo. Ndinegunya ezandleni zombini zokumkhupha. Ndizakumqhekeza ndimqunqe. Abantu ababonanga okona kulungileyo kum. Lo mlo uza kubonisa ukuba ndingenza enye into. Ndijonge phambili ekuboniseni yonke ireferensi yam kunye nesakhono. Ndifuna ukuphumelela ngendlela etshabalalisayo kwaye ndimkhuphe. Ndifuna ukuthumela umyalezo ocacileyo kubo bonke abanye abalwa kwicandelo le-Heavyweight nakwilizwe ukuba ndiyeza. Ndiyilungele imfazwe.
Andikho phantsi koxinzelelo. Ndizithembile kwaye ndikulungele ukwenza ishishini. I-bookies zinoDaniel kwindawo entle ngoko ke unoxinzelelo lokuzihambisa. Ndingumntu ongaphantsi kwaye ndizokumkhupha. Andikhathali nokuba abantu bandibhalile. Amava am amateur enza umahluko. Ndikhe ndaya kuvavanywa. Akukho mibuzo malunga nobuchule bam kunye nempumelelo yam. UDubois akenzanga nto kwabafundi abaphezulu okanye okwangoku kwizazi. Ndivakalelwa kukuba ndiphumelele ngakumbi kwimilo yam embalwa yokulwa kunaye. Ndenze uvavanyo kwaye ndaphendula imibuzo. Ndikwindawo apho ndikulungele ukuya khona ukuba isihloko sehlabathi. Ndikhe ndambona enkqonkqoza abafana, kodwa ucinga ukuba ngekhe ndibakhuphe abo bafana? Ndinamandla ezandleni zozibini, ndinesilevu esihle, injini yam ilungile kwaye ndikulungele ukuya kumjikelo we-12 ukuba kukho imfuneko. Ukuba ndibona ithuba ndiza kumbetha de abe phantsi. Ukuba amandla akhe akandibeki phantsi usengxakini enkulu. Ndithathe iipunch ezinkulu kwaye ndaya phambili. Ndikhetha ukungazithathi izibhamu ezinkulu. Ndifuna ukuphuma endleleni kwaye ndingabethwa. Andisikelelwanga ngesantya kodwa ndibethe kwithagethi kwaye ndihlala ndisiza. Andifuni ukuyishiya ngethuba. Ndifuna ukuya emsebenzini, ndikhangele uluhlu lwam kwaye ndimkhuphe. Akukho nto ndizokuyithetha kuye ngaphandle kokuhlonipha abadala bakho kwaye uzakwenza ngoMgqibelo ebusuku.
UDaniel Jacobs vs Gabe Rosado Ukulwa neKhadi Ubunzima obuvela eFlorida
UDaniel Jacobs vs Gabe Rosado 27/11/20
I-Seminole Hard Rock Ihotele / iCasino, iHollywood, eFlorida
Ifoto nguMelina Pizano / Igumbi leMatch
UDaniel Jacobs Ngo-167.6 xa kuthelekiswa UGabe Rosado 168
UDaniel Yeleussinov Ngo-146.6 xa kuthelekiswa UJulius Indongo 146.2
UNikita Ababiy Ngo-162.2 xa kuthelekiswa UBrandon Maddox 162
Mahammadrasul Majidov Ngo-232.6 xa kuthelekiswa USahret Delgado 291
UEmmanuel Tagoe Ngo-134 xa kuthelekiswa UMason Menard 134.8
Umkhuthazi: Igumbi lomdlalo
UTony Yoka vs Christian Hammer Fight Card Card Ubunzima obuvela eFrance
IBoxen247.com Akohlulwanga	Aboubeker Bechelaghem, Isando samakristu, UKamil Sokolowski, Tony Yoka, UVictor Faust, IVolkan Gökcek	0
UTony Yoka vs Christian Hammer 27/11/20
Ifoto nguPetro Mysyshyn
Tony Yoka Ngo-239.2 xa kuthelekiswa Isando sobuKrestu 258.8
UVictor Faust Ngo-237.0 xa kuthelekiswa UKamil Sokolowski 234.6
IVolkan Gökcek Ngo-143.3 xa kuthelekiswa Aboubeker Bechelaghem 144.2
Umabonwakude: ESPN +
UMauricio Sulaimán -UMongameli we-WBC: Ubume beCandelo le-Bantamweight
IBoxen247.com Akohlulwanga	ICandelo leBantamweight, UMauricio Sulaimán, UNonito Donaire, UNordine Oubaali, wbc	0
INGXELO YOLAWULO LWE-WBC BANTAMWEIGHT
Intshatsheli ye-WBC yeHlabathi ye-Bantamweight u-Nordine Oubaali wayecwangciselwe ukuba enze ukhuselo olunyanzelekileyo lwesihloko sakhe ngo-Disemba 19, 2020, ngokuchasene neNombolo 1 yomlo-manqindi okalwe nge-WBC uNonito Donaire. Ngenxa yesiphumo sovavanyo seChampion Oubaali sika-Covid-19 ngasekupheleni kuka-Okthobha, i-WBC ibeke iChampion Oubaali njenge-WBC yeBhola yeHlabathi kwi-Recess, kwaye yavuma ukubangisana phakathi kweNombolo 1 Donaire kunye neNombolo 4 u-Emmanuel Rodriguez kwesihloko.
I-WBC inqwenela ukucacisa ubume beCandelo le-WBC Bantamweight kunye ne-WBC yeQela leHlabathi u-Nordine Oubaali, ngokubhekisele kwi-WBC ye-WBC yeQela le-Oubaali njenge-Champion In-Recess, ngokuhambelana neMigaqo ye-WBC kunye noMmiselo.
1. Njengentshatsheli yeWBC yeHlabathi kwiKhefu, iChampionship Oubaali is, isala kwaye iza kuhlala iyintshatsheli yeWBC yeHlabathi.
2. Intshatsheli uOubaali ngoku iyakonwabela ukubizwa kwe-WBC yeQela leHlabathi "kwi-In-Recess." Oko kuchongwa akunciphisi ukwamkelwa kweWBC, okanye inqanaba likaChampion Oubaali, njenge-WBC yeQela leHlabathi. Ngapha koko, isikhundla seNtshatsheli yeHlabathi kwi-Recess siphakamisa isikhundla saso kwinqanaba eliphezulu ngokunika iChampion Oubaali amalungelo awongezelelekileyo angazange awonwabele ngaphambili.
a. Intshatsheli u-Oubaali ngekhe ibe nomhla obekiweyo wokubuyela eringini ngaphandle kokuphulukana nenqanaba lakhe leNtshatsheli yeHlabathi. Endaweni yokubuya kwakhe kuya kuqhutywa zii-WBC kunye neemfuno zonyango ezikhethekileyo zekhomishini yengingqi yamatyala afana nalawo.
b. Intshatsheli u-Oubaali izakubuyela eringini njengeyona ntshatsheli yeWBC yeHlabathi ibuyayo kwaye iya kuvunyelwa, ukuba ikhetha njalo, ukuzikhusela kwitayitile yayo kukhuphiswano lokuzithandela, ukubuyela eringini nokulungiselela umlo onyanzelekileyo.
Ngokubhekisele kwimpumelelo yesinyanzelo seChampion Oubaali neyokuphumelela i-Donaire vs. Rodriguez bout, ngokuhambelana neMithetho ye-WBC kunye neMimiselo, i-WBC izakuqala ixesha elitsha lokuthetha ngokukhululekileyo. Ukuba amaqela akafikanga kwisivumelwano phakathi kwelo xesha, i-WBC iyakucwangcisa umsitho wokunikezela ngesipaji, ngesaphulelo semali esinqunyiweyo sama-3/60 endaweni yeChampion Oubaali.
4. Ukuba uChampion Oubaali ukhetha ukuzikhusela ngokuzithandela ngoFebruwari ka-2021, oyiphumeleleyo uDonaire noRodriguez kufuneka alwe noChampion Oubaali ngaphandle kokungenelela (ethatha isigqibo sokuba uChampion Oubaali uphumelele ukuzikhusela kwakhe ngokuzithandela). Ukuba nangasiphi na isizathu, uChampion Oubaali ucela umhla emva koFebruwari ka-2021 ukuba enze ukuzikhusela ngokuzithandela, i-WBC iya kuvavanya ixesha lomlo onyanzelekileyo wokuqinisekisa ukuba iChampion Oubaali iya kufumaneka ukuba ilwe ngexesha elifanayo nophumeleleyo i-Donaire vs.Rodriguez bout.
UMauricio Sulaimán, uMongameli we-WBC